Sukundiyeka ndicofe isihlanu - Okunye
I-keyboardist u-Ben Roma usixelele ngale ngoma: 'Kukho enye ebhalwe ngu-Ethan (Mentzer, C5 bass ebizwa ngokuba' Ungandivumeli ndihambe, 'kwaye waqala ukubhala ukuba xa sasikwindwendwe e-Asiya, kudala. Saqala ukuyikhaba ngeenxa zonke. Eyona nto yayinamandla yayisandula ukwenza iphulo kumazantsi mpuma eAsia ukunceda ekulweni ukurhweba ngabantu ngokungekho semthethweni kunye nokuxhaphaza. Oko ibikukuphuma kweMTV. Ke ngokuya sasilapho, enye yezona zinto zinamandla esasizenzile, sasidlala ikonsathi, kwaye kwakufuneka sidlale iTempile yaseAngar ehlathini, zonke iintlobo zezinto ezazibetha ngokupheleleyo ezingqondweni zethu. Ndicinga ukuba yenye yezona zinto zinamandla, kufuneka sityelele indawo yokuhlala iSomaly Mam Foundation. Ngokusisiseko ngamaxhoba okurhweba ngesondo, kwaye kwakunzima kakhulu. Kulula kakhulu ukuya eCambodia kwaye ugqithisele umntwana komnye umntu, kwaye kulapho bathengiswa khona njengamakhoboka. Kwaye yile nto iyiyo, uhlobo olunzima kakhulu lobukhoboka banamhlanje. Ke emva kokuxhoma ixeshana nomntu wonke kwaye sibahlobo sokwazi ngamabali abo, sidlale iingoma, kodwa eyona ibincomeke kakhulu yile 'Ungandivumeli Ndihambe.' Ingoma ithetha ngokuxhoma. Elinye lawona mazwi anamandla ngala 'Uzama ukufihla amanxeba akho, kwaye ngalo lonke eli thuba ungandiyeki ndihambe, musa ukujika.' Xa loo nto yenzekile, bayiguqulela, kwaye ibingomnye nje wale mizuzu.
Isibini sabantwana basazi isiNgesi, kwaye usibona nje. Kwaye yayiyeyona miboniso inamandla, kuba yayingeyiyo umboniso , kwakudlala nje egumbini. Kodwa ndingumntu othanda unxibelelwano kunye nokubhala ingoma, kwaye leyo yayingumzuzu oyinyani apho ngandlela thile yayinxibelelana. Apha silapha eCambodia nala maxhoba ... ayenamandla ngenene- yile nto siyicingayo xa sidlala loo ngoma. Ndicinga ukuba ukuphuma kweMTV kungenza ividiyo yengoma kulo nyaka, siza kubona. Benza iRadiohead 'Yonke into endiyifunayo' kunyaka ophelileyo wevidiyo. Ke ukuze babacinge malunga nalo, lilungelo lokwenene, kuba ngumkhankaso omangalisayo.
Xa uBen ethetha ngengoma eguqulelweyo, uyacacisa: 'Ewe, ibingenguye bonisa, yayikwindawo yokuzimela. Ke yayiyincoko nje eninzi. Sasinomguquleli, kuba abantwana abaninzi babethetha isiCambodia. Bayibiza ngokuba yiKhmer. Bacele ukuba singawatsho amazwi abo ukuze bawaguqulele, kwaye benjenjalo, kwaye yayinamandla ngenene, kuba ndicinga ukuba abantwana bazivalele ngaphakathi. ' (Jonga udliwanondlebe olupheleleyo lukaBen Roma.)
Isuka e Iwebhusayithi yeSomaly Mam : 'Uzalelwe kwintsapho encinci kwiphondo laseMondulkiri eCambodia, uSomaly Mam waqala ubomi kwintlupheko enkulu. Ngokukhetha okunqongopheleyo njengohlanga olucalucalulwayo, kwaye behlala kwithemba elingenakuthelekiswa nanto, usapho lwakhe lwalusoloko lubhenela kwiindlela ezinqabileyo zokuphila. Ukudibana kwezi meko zimbi kukhokelele kwizinto ezoyikekayo ezingathethekiyo ezaziza kuphawula iminyaka yobudala bukaSomaly. USomaly wathengiswa ebukhobokeni ngokwesondo yindoda eyayizenza utatomkhulu wayo. Kude kube namhla, ngenxa yokuhamba kwexesha kunye nokungathembeki kwenkumbulo eyenzakeleyo, uSomaly akakayazi ukuba le ndoda yayingubani kuye. Nangona kunjalo izenzo zakhe zambeka kwindlela engacingekiyo egcwele ingozi, ukuphelelwa lithemba, kwaye ekugqibeleni ... uloyiso.
Ukunyanzelwa ukuba usebenze kwindawo yoonongogo kunye nabanye abantwana, uSomaly wayethuthunjiswa gadalala kwaye edlwengulwa mihla le. Ngobunye ubusuku, wenziwa ukuba abukele njengoko umhlobo wakhe osenyongweni wayebulawa ngolunya. Esoyika ukuba uza kudibana naloo nto, uSomaly wasinda ngobugorha kubathimbi bakhe kwaye wazimisela ngokwakha ubomi obutsha. Wathembisa ukuba akasoze abalibale abo bashiyekileyo kwaye sele enikezele ubomi bakhe ekusindiseni amaxhoba kunye nokuxhobisa abasindileyo.
Ngo-1996, uSomaly waseka umbutho ongekho phantsi kukarhulumente waseCambodia obizwa ngokuba yi-AFESIP (Agir Pour les Femmes en Situation Precaire). Phantsi kobunkokheli bukaSomaly, i-AFESIP isebenzisa indlela ebanzi eqinisekisa ukuba amaxhoba akapheleli nje ekubalekeni ubunzima bawo, kodwa anamandla okomoya kunye noqoqosho lokujongana nekamva ngethemba. Ngokusungulwa kweSomaly Mam Foundation e2007, uSomaly useke isithuthi sokuxhasa ngemali ukuxhasa imibutho elwa nokuthengisa ngokungekho sikweni kunye nokubonelela amaxhoba kunye nabasindileyo ngeqonga apho amazwi abo anokuviwa khona kwihlabathi liphela.
Ngenxa yemizamo yakhe engadinwayo, uSomaly kufanelekile ukuba azuze imbeko kwihlabathi liphela kwaye ngoku uyinkokeli eyaziwayo ephambili kumzabalazo wokulwa nokurhweba ngabantu ngokungekho mthethweni. Ukwamkelwa kwilizwe liphela njengombonisi ngenkalipho yakhe, isidima, ubukrelekrele, kunye nokomelela kwakhe, uSomaly wahlonitshwa njengomnye wabantu abali-100 abanamandla eTime Magazine ka-2009 kwaye wabonakaliswa njengeQhawe le-CNN. Ukwangumamkeli weNkosana yeAsturias Award yeNtsebenziswano yaMazwe ngaMazwe, Ibhaso laBantwana leHlabathi lamaLungelo oMntwana (WCPRC), iGlamour Magazine's 2006 Woman of the Year Award, kwaye uphumelele iimbasa kwiSebe lezoKhuseleko lwaseKhaya laseMelika.
Kodwa impumelelo kaSomaly ifike ngexabiso. Yena nosapho lwakhe bajongane nokoyikiswa ngokufa kunye nogonyamelo. Xa ebuzwa ukuba kutheni eqhubeka esilwa ejamelene nenkcaso eyoyikisayo, uSomaly uphendule ngokuqinisekileyo, 'andifuni kuhamba ndingashiyi nomkhondo.'
Ngaphandle kwento yokuba waziwa kwihlabathi liphela kwaye ngokuqinisekileyo uzuze ubomi obutofotofo kunye nokuphumla, uSomaly uyaqhubeka nokuphila ubomi obulula kwaye usebenza nzima kumaziko okubuyisela eCambodian, ehlala phakathi kwabafazi nabantwana ebahlangulayo kwaye ehlala ecaleni kwabo njengokuba behamba indlela enzima yokubuyela enkululekweni. '
UMarc cohn uhamba kwiimemphis ezinye ezirekhodiweyo zale ngoma
ababulali zonke ezi zinto ndizenzileyo
roy clark izolo xa ndandisemncinci